माफ गर्नुस्, बहुराष्ट्रवाद नेपालमा असम्भव छ ! ‘मधेसमा अलग राष्ट्रको मापदण्ड बकवास मात्रै’::KhojOnline.com
माफ गर्नुस्, बहुराष्ट्रवाद नेपालमा असम्भव छ ! ‘मधेसमा अलग राष्ट्रको मापदण्ड बकवास मात्रै’
इतिहासदेखि नै नेपाल सिंगो राष्ट्र हो । एकभन्दा बढी स्वतन्त्र राष्ट्रहरु गाभिएर बनेको महासंघ होइन हाम्रो देश । राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुपूर्व नेपाल स-साना राज्यहरुमा विभाजित अवस्थामा थियो । बाइसे र चौबीसे राज्यहरु थिए । तर, तिनीहरु कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा भने थिएनन् । नेपालकै छुट्टएिका अंगहरु मात्रै थिए ।
स्वतन्त्र राष्ट्रका थुप्रै शर्तहरु हुन्छन् । सर्वप्रथम बेग्लै भूभाग चाहिन्छ । त्यसपछि बेग्लै भाषा चाहिन्छ, बेग्लै अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध कायम हुनुपर्छ । एकीकरण पूर्वका राज्यहरुमा छुट्टै सीमानाबाहेक यस्तो केही पनि थिएन ।
त्यसैले तिनीहरुको हैसियत बेग्लै प्रशासनिक इकाइजस्तो मात्रै थियो । ती सबैलाई एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको रुप दिएका हुन् ।
पृथ्वीनारायण शाह र उनका वंशजहरुले विस्तार गरेको नेपालपछि खण्डित हुन पुग्यो । अंग्रेजहरुसित लडाइँमा हारेपछि सुगौली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो एक तिहाइ भूभाग गुमायो । त्यसपछि अहिलेको नेपालको नक्शा तयार भएको हो ।
नेपालले कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि सैन्य विजय हासिल गरेर आफूमा गाभेको छैन । त्यसैले अहिले महन्त ठाकुर र मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो बहुराष्ट्रवादको अवधारणा नेपालमा असम्भव छ ।
ठाकुरले अलग मधेसमा अलग राष्ट्रको ‘क्राइटएरिया’ पुगेको बताएका छन् । यो बकवास हो । मधेस सधैं नेपालको एउटा अभिन्न अंगका रुपमा रहेको छ र रहनेछ ।
नेपालमा मधेस र पहाड कहिल्यै अलग थिएनन् र छैनन् । न भौगोलिक हिसाबले मधेस-पहाड अलग रहेका छन् न मनोवैज्ञानिक हिसाबले । एकीकरणअघि पूर्वमा विजयपुर राज्य थियो, जहाँ किरातले शासन गरेका थिए । त्यो राज्य झापा, मोरङ, सुनसरीदेखि ताप्लेजुङसम्म फैलिएको थियो । त्यसमा मधेस र पहाड दुबैपर्छ ।
मध्यक्षेत्रमा मकवानपुरलाई केन्द्र मानेर चौदण्डी राज्य थियो । त्यो पनि पहाडदेखि मधेससम्मै फैलिएको थियो ।पश्चिममा आएर सेनहरुको राज्य थियो, पाल्पालाई केन्द्र बनाएर । अझै पश्चिममा खस राज्य थियो, कैलालीदेखि कर्णालीसम्म फैलिएको । यी सबै राज्यहरु पहाड र तराई मिसिएर बनेका थिए । तराईको छुट्टै राज्य नेपालमा कहिले पनि छैन ।
अहिले आएर मधेसी मोर्चाले अघि सारेको बहुराष्ट्रिय राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग आपत्तिजनक मात्रै नभएर हास्यास्पदसमेत छ । मेरो विचारमा यो माग मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिकअन्तरगत आएको छ । यसलाई बेलैमा पर्दाफास गर्न सकिएन भने भविश्यमा ठूलो रुप लिन सक्छ । नेकपा एमालेको पटक-पटक बहुराष्ट्रिय राज्यको माग नेपाल टुक्र्याउने चालवाजीसहित आएको खतरनाक स्टन्ट हो भनेर भनिसकेको छ । त्यसैले पनि मोर्चाले यसलाई जोडतोडले उठाउन सकेका छैनन् । यद्यपि, रणनीतिक ढंगले आएको माग भएकाले यसको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छैन ।
महन्त ठाकुरको भाषणबाट पनि यो पुष्टि भयो । बहुराष्ट्रको माग किन विखण्डनकारी छ भनेर बुझ्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । हाम्रै छिमेकी देशहरुको दृष्टान्त काफी छ । भारत र पाकिस्तानको विभाजन गर्दा धर्मको आधारमा बहुराष्ट्रवादको ‘थ्यौरी’ लगाइएको थियो । त्यसैअनुरुप मुस्लिमहरु पाकिस्तानतिर गए र हिन्दूहरु हिन्दूस्तानमा रहे ।
पाकिस्तान बनिसकेपछि भाषाका आधारमा बहुराष्ट्रवाद लगाएर बंगलादेशलाई जन्माइयो । नेपालमा पनि यहि चेष्टा भएको हो । मधेस र पहाड दुई राष्ट्र छन् भन्ने स्थापित गराउने अनि, मधेसलाई भविष्यमा अलग दीर्घकालीन रणनीतिअनुरुप काम भइरहेको छ । त्यसैले हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।
भारतमा अहिले पाँच सयभन्दा बढी जाति छन् । भाषा पनि त्यत्तिकै संख्यामा छन् । तर, तपाई चेन्नई, आसाम, मेघालय, कश्मिर वा बिहार जहाँसुकै जानु, भारतीयहरु आफ्नो प्रदेशअनुसार बेग्लै राष्ट्रियताको कुरा गर्दैनन् । भारतीय राष्ट्रियताकै कुरा गर्छन् । आफूलाई भारतीय भन्नमै गर्व गर्छन् । अमेरिका ५० वटा राज्यमा विभाजित छ ।
यो आफैंमा आप्रवासीहरुको मुलुक हो, जहाँ कोही युरोपबाट आएर बसेका छन् त कोही अफ्रिका र कोही एशियाबाट । त्यस हिसाबले अमेरीकामा अलग-अलग राष्ट्रियता हुनुपथ्र्यो । तर, सबैले अमेरिकी राष्ट्रियता नै स्वीकारेका छन् नि । हाम्रो मधेसी नेताहरुलाई चाहिँ किन नेपाली राष्ट्रियता स्वीकार्न कठिन भएको ?
जातका आधारमा नेपालमा अलग-अलग राष्ट्रियता छ भन्ने बहस सुरु गरेको माओवादीले हो । जनयुद्धकालमा उनीहरुले विभिन्न जातिलाई अलग राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गरे । आफ्नो सैन्य शक्ति कमजोर हुँदै गएपछि विभिन्न जातिका मानिसलाई सेनामा भर्ति हुन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्ले पनि जातिपिच्छेका राज्य बाँड्दै हिँडेका हुन् ।
लिम्बुवान, किराँत, तामसालिङ, मगरात, नेवा, थरुहटयस्तै अनेकानेक जातीय राज्यहरुको सपना बाँडे उनीहरुले । यो पूरा हुने सपना थिएन । नेपालको बनोट र विकासक्रम उनीहरुले व्याख्या गरेजस्तो थिएन । अहिले आएर बल्ल माओवादीले यो सत्यलाई बुझेको छ । त्यसैले जातीय राज्यबाट पछि हटेको छ । राष्ट्रियतालाई आत्मसात गरेको छ । जबकि माओवादीबाट निस्केका डा. बाबुराम भट्टराई अझै जातीय राज्यको डेट एक्सपायर्ड ओखती खाएर कुदिरहेका छन् ।